Shiinaha Feed Sack warshad iyo alaab-qeybiyeyaal. Feiqing
Xirmooyinkayada Cunnada waa nooc casriyeysan oo lagu hirgeliyo Ciyaaraha tartanka. Naqshadeynta ayaa si isdabajoog ah loogu dayday sanado badan, jawaanka quudinta waxaa laga sameeyaa 1050D Cordura 100% nylon Dhismaha boorsooyinka leh naylo wareegsan, xoojinta saddexda tolliimo leh, iyo furitaanka mashiinka-buuxinta ee fudud, buuxinta saxda ah.
Sida lagu arkay Ciyaaraha, qabashada Feak Sack ee gacmaha dheer, qabashada fudud waxay awood u siineysaa ciyaartoydu inay si dhaqso leh u soo qaadaan culeyska oo ay si hufan ugu lulaan madaxa ama qoorta si ay meel u qaadaan. Dhibcaha meesha ay gacmahoodu ku kulmaan geesaha boorsada waxaa lagu xoojiyay xayiraad naylon, jiinyeerkuna wuxuu leeyahay dib-u-dhiska polyurethane iyo dabool si loo hagaajiyo dabacsanaanta, loo xiro daadinta, iyo ka hortagga xiriirka tooska ah ee dhabarka isticmaalaha. Natiijadu waa jawaan ciideed oo labadaba si fudud loo maareyn karo oo raaxo leh in lala ordo. Waxay waliba si isku mid ah ugu habboon tahay xoqidda dhaqdhaqaaqyada, riixayaasha, nadiifinta iyo saxaafadda, iyo inbadan.
Sack Feed oo leh saddex cabbir: 50lb, 100lb, 150lb
Fadlan fiiro gaar ah u yeelo: Awoodda culeyska ee kor ku xusan waxay tixraacayaan ugu badnaan culeyska markii lagu buuxiyo ciid ciid qalalan ah. Miisaanka ugu badan wuu kala duwanaan doonaa marka la isticmaalayo qalabka kale ee wax lagu buuxiyo. Macaamiisha doorta inay ku daraan amar ah buuxinta caag-jajabkeena amarkooda Waxaa intaa sii dheer, boorsooyinkan lama sii buuxiyo.
1.1050D Cordura 100% naylon wax, YKK jiinyeer.
2. gacmo furan oo nayloofan ah, oo la xoojiyay tolliimo saddexlaab leh, furitaanka mashiinka-filka.
Cabbirka seddexaad: 50lb, 100lb, 150lb
Astaanta 4.custom ee 1pc.
Logo 5.embroidery, logo tolida, logo daabacaadda kulul, logo daabacaadda ayaa la heli karaa.
Hore: Bacda ciida ee Strongman
Xiga: Bac adag oo adag
Blocks Wood Jerk
Sanduuqa plyo madow alwaax
Kubadda PVC slam